Isiraely: Vondrom-bavaka hiavian’ny orana · Global Voices teny Malagasy
Isiraely: Vondrom-bavaka hiavian'ny orana
Voadika ny 13 Desambra 2008 5:36 GMT
Vakio amin'ny teny Français, bahasa Indonesia, 繁體中文, 简体中文, English
Nirotsaka ihany tamin'ity herinandro ity ny oram-batravatran'ny ririnina taorian'ny fiandrasana azy am-bolana maro lasa izay ka nahatonga an'i Isiraely hisento.
Yaakov Kirschen, mpanoratra sy mpandravaka antsary ao amin'ny The Dry Bones Blog, no nandray penina:
“Nandray fiarakaretsaka aho omaly, feno eritreritra momba ny fampihorohoroana tany Mumbai (Bombay), ny tifitra balafomanga avy any Gaza, ny heloka iraisana tsikombakomba, ny fifidianana ho avy, [ny Praiminisitra Ehud] Olmert, ary ny fitotongan'ny toekarena manerantany aho no nanontany ny mpanamory “Ahoana ny eritreritrao amin'izao toe-draharaha izao?”
Hoy izy “Mbola tsy mety avy ny orana. Efa voalohan'ny volana Desambra izao nefa tsy mbola avy ny orana!”
Azoko avy hatrany nytiany lazaina. Efa leo miresaka amin'ny toe-draharaha ankehitriny izy.”
Porofon'ny filazana fa sarotra vao miova ny toe-draharaha aty Azia Andrefana, efa namoaka izao “Tsy Tontan'ny Ela” izao i Kirschen 20 taona lasa izay.
[Raha tsy misy ny intifada, ny mpanao politika baombina, ny niharam-boinan'ny horohorontany, Koor sy ny fiakaran'ny tahan'ny tsy fananan'asa, dia inona moa izany no resahintsika? Ny tsy fahampian'ny orana… resa-kabary ilay teo ka]
Tao amin'ny lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe “Anjara Mifaningotra,” no nanoratan'i Lirun ao amin'ny East Med Sea Peace hoe:
“Maina ankehitriny ny andro eto Isiraely sy Palestina.. Efa nandalo ririnina roa maina dia maina isika ary managasanga eto amin'ny faritra koa ny fahamainana fahatelo.. mianjady amin'ny rehetra izany.. tratran'ny tsy fahampiana avokoa ny olon-drehetra.”
Nahamarika i Lirun fa nahatonga ny olona hivondrom-bavaka hiavian'ny orana ny tsy fisian'ny orana, ary dia nasongadiny tamin'ny lahatsary iray izany fihaonana izany.
Etsy andanin'izany, Nicky Blackburn ao amin'ny Israelity no mampahatsiahy ny fihodinana am-bisikileta ny farihin'i Kinneret (na Ranomasin'i Galilia) ka nahatonga azy hahatsikaritra fa ambany loatra mampanahy ny haavon'ny rano. Ny Kinneret manko no rano fisotron'Isiraely lehibe indrindra. Hoy Blackburn :
“Fa lasa aiza ny rano? Ary tsy mahita mariky ny fihavian'ny ririnina manorana mihitsy isika. Fa mitovy amin'ny any amin'ny tanihay (dezera) aza ny toetr'andro eto Isiraely amin'izao fotoana izao… Ka izany no mahatonga an'i Rabbi Shlomo Didi avy any amin'ny lemaky Jordana, Ian Clark – pretran'ny fiangonana Ekôsey, ary Muhammad Dahamshe, Imam avy ao Kfar Kana, nivory mba hampahalefaka ny toe-draharaha tamin'ny alalan'ny vavaka miara-dalana.”
Nanatsonga ny tenin'i Shimon Kipnis, talen'ny trano fandraisam-bahiny iray ao an-toerana , nilaza izao i Blackburn :
“Hitantsika fa efa mahatratra ny fetran'ny tsipika mainty (henjana noho ny tsipika mena ve?) ny haavon'ny rano. Ny tanjon'ity hetsika ity dia ny hampiray ny fivavahana rehetra ary ny hanao vavaka iraisana amin'ny Nahary Izao Tontolo Izao, hitahy antsika hisian'ny fotoanan'ny orana.”
“Nisy… orana ihany!” hoy ny hiakan'i Israeli Mom omaly.
“Tamin'ity maraina ity, tena finaritra ny tena mahita ny rahona matroka tanteraka nameno ny lanitra. Tsy dia mamirifiry loatra, fa mangatsika mahafinaritra, ary toa miemboky ny fofon'orana madinika avokoa ny rehetra. Erika ihany ilay izy, ary dia nampiditra kiraro aho hihazakazaka hitsinjaky ny hafalian'ny loko sy ny voninkazo mandritra ny atsasak'adiny, eny fa na dia ny tany mena ambadiky ny arabe aza. Mahafinaritra.”
Tsy misy zavatra mampiray sy mampahatsiahy antsika ny mahaolombelona antsika ankoatra ny Reny Natiora. Mahatsiaro feno fankalazana isika noho ny fitahian'ny fisian'ny orana amin'izao tany maina izao.
16 Desambra 2020Aostralia